SUPERBAHİS221 MUSTAFA CENGİZ'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! - RESTBET501.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS221 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်သူဟာ Ankara ကိုသွားခဲ့တာပါ။ တက်ရောက်သူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတရား ၀ င်အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအရာကိုပင်မယုံကြည်သူများရှိခဲ့သည်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူသည်တာ ၀ န်ရှိသလားကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ တရား ၀ င်တရား ၀ င်အကြောင်းကြားစာကိုတရားဝင်စာဖြင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာကိုပင်ဖတ်ရှုခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထောင်ချောက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ။
သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမပြောပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်သဘာဝကျပါသည်။ သင်ဖျားနာနေလျှင်သင်ဘာလုပ်နေပါသနည်း။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ကောင်းစွာတိုးတက်နေပါသည်၊ ငါပြင်ပကနေကြည့်ရှုသောအခါဤသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်။ ငါတိုက်ခိုက်ရန်အနေအထား၌မဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်သလိုငါနိုင်ငံရေးထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်သလိုစီးပွားဖြစ်ကအကဲဖြတ်ရန်အခွအေနေရှိသည်မဟုတ်။ ငါနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်၏။ ငါ့အလုပ်အကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ။ မင်းငါ့မိသားစုနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကငါ့ကိုအရင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးကတည်းကနုတ်ထွက်စေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ် “ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် Mustafa Cengiz “သူတို့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိလှတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာဂလာတာဆာရာမှလာကြတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ဖက်ကလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကဒိုင်းနမစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။ ငါတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာနောက်ဆုံးကျင်းပချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နေသည်ဟုထင်သောအပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ရှားမည်မဟုတ်ပါ။ အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Er square “ အသုံးပြုထားသောအသုံးအနှုန်းများကိုဖွင့်နေကြသည်။
RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SULTANBET542 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS29 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 KORONAVİRÜSE YAKALANAN RYAN BABEL’DEN İYİ HABER GELDİ RESTBET501 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! SUPERBAHİS221 GÖKHAN TÖRE RESMEN BEŞİKTAŞ’TA! SUPERBAHİS221 GALATASARAY’DAN FLAŞ ERKEN SEÇİM KARARI!
12 Comments on SUPERBAHİS221 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
SUNA November 27, 2020 at 4:00 am
SÜMEYRA November 27, 2020 at 6:10 am
GÖKHAN November 27, 2020 at 11:30 am
ARMAN November 28, 2020 at 1:10 am
EBRU November 30, 2020 at 5:40 am
EMEL November 30, 2020 at 6:40 am
İHSAN BURAK December 2, 2020 at 1:20 am
SEMA December 5, 2020 at 1:20 pm
MEHMET December 5, 2020 at 5:00 pm
MEHMET December 6, 2020 at 9:40 pm
İLKAY December 7, 2020 at 12:30 am
FERAY December 9, 2020 at 7:00 pm